Tstar Composites-ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနှင့် ဖိုက်ဘာမှန် ထုတ်ကုန်များ
ငါတို့သည် FRP ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမို ပေါ့ပါး ခိုင်ခံ့အောင် ပြုလုပ်ပါ။
မည်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အသွင်အပြင်ကိုမဆို Customize လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် Tstar ကိုရွေးချယ်သနည်း။
ကျော်ကျော်သည် frp လုပ်ငန်းတွင် အထူးပြုသည်။ 20 နှစ်ပေါင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာနှင့် မှန်ဖိုက်ဘာ ထုတ်ကုန်စက်ရုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကထုတ်ကုန်များတွင် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပြွန်၊ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာလှံတံ၊ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပုံသွင်းထုတ်ကုန်များ၊ ဖိုက်ဘာမှန်လှံတံ၊ ဖိုက်ဘာမှန်ပြွန်၊ ဖိုက်ဘာမှန်ချပ်၊ ဖိုက်ဘာမှန်ပရိုဖိုင်များ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို စွန်များ၊ ရွက်လွှင့်ခြင်း၊ ထီးများ၊ ရွက်ဖျင်တဲများ၊ ဂေါက်အိတ်များ၊ ခြံစည်းရိုးစနစ်များ၊ ပျိုးခင်းလောင်းကြေးများ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ ကိရိယာလက်ကိုင်များ၊ အင်တင်နာချောင်းများနှင့် အကာများ၊ လှေကားသံလမ်းများ၊ စုတ်တံများ၊ အရုပ်များ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များအပြင် tripods၊ အလံတိုင်များအတွက် နှင်းလျှောစီးတိုင်များ၊ လျှပ်ကာများ၊ ဆန်ခါများ၊ ပေါင်းစပ်ကျောက်တုံးများ၊ ဖိုက်ဘာမှန်များ/ကာဗွန်တုံးများ၊ စသည်တို့။
မြင့်မားသော output ကို
အသွင်အပြင်အမျိုးမျိုး (1k,3k,UD စသည်ဖြင့်)
cnc ဖြင့် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အကျိုးကျေးဇူးငါးမျိုးရှိသည့် ဝါး သို့မဟုတ် သစ်သားကို အစားထိုးရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု။
1. ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် ဓာတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်အတွက် အထူးကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်
2. ဝါးကြေးနှင့် ထင်းခွဲများထက် စိုက်ပျိုးရာသီတွင် ပိုမိုရှင်သန်နိုင်သည်။
3. ပေါ့ပါးသော်လည်း ခိုင်ခံ့ပြီး မည်သည့်အခါမှ သံချေးတက်မည်မဟုတ်ပါ။
4. သွယ်သောအဆုံးဖြင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရှည်ကို ဖြတ်ရလွယ်တယ်။
5. သက်တမ်းရှည်ခြင်း။ စံပြလေ့ကျင့်ရေးလောင်းကြေးများ၊ ဥယျာဉ်လောင်းကြေးများ၊ ပျိုးခင်းလောင်းကြေးများနှင့် စပျစ်ခြံလောင်းကြေးများ၊ ခရမ်းချဉ်သီးကြေးများ
သံလွင်ရိတ်သိမ်းသူများသည် ကာဗွန်ဖိုက်ဘာအချောင်းများကို ဖြတ်သည်။
ပေါ့ပါးပြီး ခိုင်ခံ့မှုလိုအပ်သော မြန်နှုန်းမြင့် ယန္တရားများတွင် အသုံးများသည်။
1. မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှု (သံမဏိ 7-9 အဆ)
2. အချိုးအစား အနည်းငယ် (သံမဏိ 1/4)
4. Low thermal expansion coefficient (သေးငယ်သော ပုံပျက်ခြင်း)
5. သေးငယ်သော အပူပမာဏ (စွမ်းအင်ချွေတာမှု)
6. ကောင်းသောအပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် (မြင့်မားသောအပူချိန် 200 ℃အထက်သည်းခံနိုင်ပါတယ်)
7. အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်း နှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်
2020 အကောင်းဆုံး ဖိုက်ဘာမှန် ကုလားကာတံ
လတ်တလော ဆောင်းပါးများနှင့် သတင်းများ
epoxy FR4 ပန်းကန်ပြားကိုအသုံးပြုခြင်း။
စက်တင်ဘာလ 24, 2021 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
Epoxy FR4 plate FR4 board အဓိပ္ပါယ်- ၎င်းကို ပြုပြင်ထားသော bismaleimide resin ဆေးဖြင့် ရောနှောထားသော အီလက်ထရွန်းနစ်အဆင့် မှန်အထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အခြောက်ခံကာ ပူပူနွေးနွေး ဖိထားသည်။ အမှုဆောင်စံသတ်မှတ်ချက်- Q/TXXFR003-2010 အပူချိန်ခံနိုင်ရည်အဆင့်- H အဆင့် အရောင်- သဘာဝအရောင် (အညိုရောင်) လက္ခဏာများ- ၎င်းတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ အပူခံနိုင်ရည်နှင့် ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရေရှည်လုပ်ငန်းခွင်အပူချိန် ≥180 ℃။ အသုံးပြုမှုများ- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုအတွက် သင့်လျော်သည်။
G10 epoxy board ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
စက်တင်ဘာလ 23, 2021 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
G10 epoxy ဘုတ်အား မော်တာများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ၊ ခလုတ်ခုံများ၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ DC မော်တာများ၊ AC contactors၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော မော်တာများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ 3240 သည် ရိုးရာဘုတ်အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုသည်။ G10 သည် ဥရောပနှင့် အမေရိကန် စနစ်များတွင် အသုံးများသော ဘုတ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကုန်ကြမ်းက အစေးဆိုတော့
မတူညီသောအပူချိန်တွင် insulating board ၏လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်
စက်တင်ဘာလ 13, 2021 1 မှတ်ချက်
Insulating board သည် အသုံးများသော insulating material တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ insulating board ၏ insulation သည် မတူညီသောပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးကြောင့် ထိခိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး insulating board ၏ insulation သည် မတူညီသောအပူချိန်ကြောင့်လည်း သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ insulation ဆိုတာဘာလဲ
ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ စက်ရုပ်လက်ရုံးများ၏ အားသာချက်များကို သင်သိပါသလား။
ဧပြီလ 7, 2021 မှတ်ချက်မရှိသေးပါ
ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ စက်ရုပ်လက်တံ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တိကျစွာ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန်နှင့် စံလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် သုံးဖက်မြင် (သို့မဟုတ် နှစ်ဘက်မြင်) နေရာကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်စက်ကိရိယာများထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့် စက်ရုပ်လက်နက်များသည် စက်မှုကုန်ထုတ်မှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် အာကာသရှာဖွေရေးတို့တွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ နောက်ထပ်
Shenzhen ရုံးချုပ် Add-
Yongfu အဆောက်အဦ၊ baoan၊ ရှန်ကျန်း၊ ကွမ်တုံ၊ PRChina
Dongguan စက်ရုံ Add-
Jilong စက်မှုပန်းခြံ၊ Changlong၊ Huangjiang၊ Dongguan၊ Guangdong၊ PRChina
Huizhou စက်ရုံ Add-
ထားဝယ်စက်မှုဥယျာဉ်၊ huicheng၊ huizhou၊ Guangdong၊PRChina
linkedin Facebook မှာ-,fYoutube ကို Instagram ကို
Tstar Composites © 2021 ခုနှစ်၏ အခွင့်အရေးများ
Whatsapp Skype ကို စာအိတ်